Usoro | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nyere aka ịdebanye aha nke Samsung TVs?
Nyere aka ịdebanye aha nke Samsung TVs? Na ileba anya mbụ, aha Samsung TV na-eme ka ha nwee ọtụtụ akwụkwọ ozi na ọnụọgụgụ, nke yiri ka ọ na-apụtaghị n'usoro. N'ezie, enwere ike iji ihe ozi ole na ole kọwaa ihe, ...
Kedu otu esi elele ihe ntanetị igwe eji eme ihe ziri ezi n'ụlọ?
Kedu otu esi elele ihe ntanetị igwe eji eme ihe ziri ezi n'ụlọ? ndị na-ahụ maka ọgwụ na-enwe ihe ziri ezi ziri ezi na ihe dị arọ, n'ụzọ nkịtị. batara ma jụọ ihe dị arọ maka nkeji ole na ole, ihe ọtùtù gị ...
nkwụsị usoro? Kedu ihe na-agbanwe oge? ihe kpatara ngbanwe a?
nkwụsị usoro? Kedu ihe na-agbanwe oge? ihe kpatara ngbanwe a? n'ihi otu ihe kpatara ya: ihe mere ị ga-eji na-agbanwegharị bụ ọnụnọ nke ihe ndị na-emegharị na sekit, ebe ọ bụ na ha na-agbakọta ma hapụ mmanụ eletrik ma ọ bụ ...
Kedu ụkpụrụ nke Schauberger vortex engine?
Kedu ụkpụrụ nke Schauberger vortex engine? Ma ...
Ọ na-emerụ ahụ iji kwụọ ụgwọ ekwentị site n'ịgba ụgwọ na nnukwu amperage?
Ọ na-emerụ ahụ iji kwụọ ụgwọ ekwentị site n'ịgba ụgwọ na nnukwu amperage? Na-emerụ ahụ, nwere ike ire ọkụ ngosi ahụ (ọ bụghị ozugbo kama nke nta nke nta). N'ozuzu, ọ na-abịakwute ndị dị otú a na ọ fọrọ nke nta ihe ọ bụla agaghị ahụ anya na ngosipụta, ihe niile ...
Kedu otu esi tụọ ọnụọgụ ihe
Etu ị ga-esi tụọ arụmọrụ nke eriri igwe Freebie agaghị arụ ọrụ. Mentnweta ọnụnọ mmadụ abụghị obere ọrụ dị nfe, ịgaghị enwe ike iji ya dozie DC multimeter naanị. Ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi kwe omume. Ihe mbu, izipu ihe…
Ndi redio DCF-77 oge mgbaàmà na Moscow?
Ndi DCF-77 oge mgbaàmà na Moscow?
Kedu ihe mgbawa a ?? kedu ihe a na - akpọ ???? HEF4094BP
Kedu ihe mgbawa a ?? kedu ihe a na-akpọ'?? HEF4094BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17726/PHILIPS/HEF4069UBP.html njikọ ejikọtara site nchịkwa nchịkwa na ntinye usoro, ...
Ònye maara otú e si edozi ọwa na ochie PHILIPS TV, ebe ọ na-enweghị ihe dị otú ahụ na ntanetị anya na menu TV?
Knowsnye mara ka esi egwu egwu ọwa na TV TV ochie, ebe enweghị ụdị ihe a na njikwa ebe dị anya na menya TV? ihe niile dị na menu, mana "ọwa na-egwu" - yabụ ọ bụghị ...
Kedu ka esi chọpụta ihe igwefoto a? Nikon D3100
Kedu otu esi achọpụta ebe ihe igwefoto nwere? Ihe nlere Nikon D3100 adighi ya nma! Ahụrụ m N ’EGO na etu ụmụaka si aza ule n’ule, n’ụlọ akwụkwọ ha,…
Gwa m biko kedu ka mmanụ si eme mkpọtụ na-arụ ọrụ? A na-akpọkwa ndị America ya ịnyịnya ibu na-efufe isi ya
Gwa m biko kedu ka mmanụ si emetụ ọrụ? Ndị America ya na-akpọkwa isi ịnyịnya ibu na-ama jijiji na mmiri ahụ n'onwe ya, e nwere ihe dịka piston nke nwere valvụ valite mgbe mbụ a malitere ...
Ana m achọ akwụkwọ dị ka "ọkụ eletrik maka oke mmiri"
Ana m achọ akwụkwọ dị ka "ọkụ eletrik maka ndị na-ere mmiri" E nwere akwụkwọ na-enweghị ego na Internetntanetị "M ỌRR EGO" !!! Rudolf Svoren "Kọmputa elektrik site na nzọụkwụ." 1986 afọ. O bidoghi na nwata. Ọtụtụ n'ime akwụkwọ a ...
Kedu ihe ọrụ nke AF na TA? kedu ọrụ ndị dị na redio: AF na TA? kedu ihe ha na-eme?
Kedu ihe ọrụ nke AF na TA? kedu ọrụ ndị dị na redio: AF na TA? kedu ihe ha na-eme? AF. Ndepụta nke uzo ndi ozo Akwukwo nke uzo ozo di n'eme ngosi ...
Kedu ka esi agbanye ígwè ahụ na mita megohm?
Kedu ka esi agbanye ígwè ahụ na mita megohm? megohm mita bụ ụzọ kachasị adabere. ị jikọọ otu kọntaktị nke mita megohm na ọkọlọtọ eletriki eletriki, ma ị na-atụgharị nke abụọ n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, na ngwa ngwa, nke ka mma. mma mgbe akụ ahụ ...
onye mepụtara ìhè bọlbụ
onye mepụtara ìhè bọlbụ N'ozuzu, e mepụtara bọlbụ mbụ na batrị maka ya na Babilọn n'oge ochie ... ihe ndị ahụ anyị na-eme bụ ndị a na-ahụ maka sayensị sayensị! ...
Onye na-egwu DVD anaghị agụ kọmputa USB
Ihe ọkpụkpọ DVD ahụ anaghị agụ USB flash drive m maara. Gịnị bụ sistemụ faịlụ gị na draịvụ draịva? NTFS adịbeghị anya na FAT32. Ekwere m n’aka na ị na-eji NTFS ugbu a.…
Kedu nke ka mma: rosin, na-egbochi abụba ma ọ bụ acid?
Kedu nke ka mma: rosin, na-egbochi abụba ma ọ bụ acid? M na-eji orthophosphoric jụọ nke ọma. Kedu ihe ị ga - eme? Ha ọchị, ha agaghị akụzi ihe ọjọọ ebe a. Ọ bụrụ na tin achọghị ịrapara n'ahụ ígwè ahụ, jiri ya mee ka ọ dị arọ. Na ...
Ego ole megabits, na otu megabyte .... mkpa kpọmkwem ..
Megabytes ole, na megabyte otu…. ikwesiri imata nke oma .. nnuku mmadu, megabit bu ihe eji achota ihe omuma banyere ya, ya na megabytes, ma di etu a na atule ihe megabits / s ma obu megabytes / s, ugbua na mkparita uka a bu “kwa abuo”…
Kedu ihe bụ rotor? Kedu ihe bụ stator? Na azụside pliz
Gịnị bụ rotor? Gịnị bụ stator? Site na njegharị pliz ROTO na-awagharị, na-atụgharị. Stator - ụkpụrụ, udo, adịghị ike. Na igwe eletriki, ha abụọ nwere ike ịnweta windings. Wikipedia DC moto. ...
Kedu ka esi eme na ultraviolet na infrared lamp?
Etu ị ga --esi mee ultraviolet na infrared n’ụlọ? DRL kechie nkpa-n'aka ma gbajie akwa mpụta (CAUTION MERCURY!) N'ime oriọna ahụ bụ "onye na-ere ọkụ", isi iyi nke radieshon. Jikọọ na-eji ...
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,346.